Kuzoba njani ukuwa? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuzoba njani ukuwa?
Kulo nyaka u-2016 usilethele ihlobo ebelingelesithathu elishisa kakhulu eminyakeni engama-51. Kepha manje futhi sizokwazi, a kungenzeka, a ukuwa okufudumele kunokujwayelekile, ngokusho kuka-Ana Casals, okhulumela i-State Meteorological Agency, esithangamini nabezindaba.
Siyakutshela ukuthi ikwindla 2016 izoba njani.
1 Kuzoba njani ekwindla eSpain kulo nyaka?
2 Ngabe ukuguquguquka kwesimo sezulu kubhekene ne- "veroño"?
Kuzoba njani ekwindla eSpain kulo nyaka?
Ngokwe-AEMET, I-Autumn, eqala namuhla ngo-16.21: 1981 ntambama, ingaba nemfudumalo kunokuba kufanele, futhi yomile, ithathe u-2010-XNUMX njengenkathi yokubhekisela. Eqinisweni, uma sikhuluma ngamazinga okushisa, kukhona 50% ithuba ukuthi mude kunokuba kufanele abe… ezweni lonke! Okuthile okungakholeki.
Mayelana nemvula, kune- 45% ithuba ukuthi lingani kakhulu njengoba kulindelwe, futhi, ezweni lonke.
Ngabe ukuguquguquka kwesimo sezulu kubhekene ne- "veroño"?
Ngokusho kwesithunywa se-AEMET eMurcia, uJuan Esteban Palenzuela, ukushisa esinakho kulo Septhemba kube ngomunye umphumela wokuguquka kwesimo sezulu. Ngaphezu kwalokho, wengeza ukuthi ''Cishe ngeminyaka engama-80 yedatha yesimo sezulu, kubukeka sengathi kuqondwe ukuthi ngaphandle kokuhlukahluka kwesimo sezulu kukhona okunye». Ngamanye amagama, kungenzeka ukuthi kancane kancane sibe nesimo sezulu esifudumele nesomile.
Ihlobo livame ukwanda, ukuze eminyakeni yamuva leli gama liqale ukusetshenziswa »lindokuhle», Njengoba kuvame kakhulu futhi ukuthi ekwindla amazinga okushisa ajwayelekile ngaphezulu kokuphela kwehlobo abhalisiwe. Ngabe sizogcina sigubha uKhisimusi ngesoda eneqhwa? Kunzima ukwazi, kepha okuqinisekile ukuthi amazinga okushisa aya ngokuya enyuka.
Ngakho-ke, uma ubulindele ukuthi ukushisa kugcine kuphele bese kuphola okupholile, mhlawumbe kuzodingeka silinde isikhashana.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Kuzoba njani ukuwa?
Angazi ukuthi kungani bephikelela ekutheni sikholelwe ukuthi unyaka ka-2016 kube unyaka ofudumele kakhulu ekubeni kunamarekhodi. Ngokulalela yona ngizoqeda ukuyikholelwa. Ngonyaka odlule ngezwa ngamagagasi amaningi okushisa emhlabeni wonke futhi ngonyaka we-2016 kube nezikhathi ezimbalwa lapho amazinga okushisa aphezulu eseqiwe. Noma nje beqhubeka nokusiqhumisa ngeqiniso lokuthi wonke amarekhodi aphuliwe kulo nyaka, akungicindezeli, ngivela eMurcia futhi lo nyaka awukaze ube nephuzu lokuqhathanisa nonyaka ka-2015. Amazinga okushisa aphakeme kakhulu ubusuku nemini nezinsuku eziningi zilandelana, okuyinto kulo nyaka engenzekanga, izinsuku ezimbalwa kuphela zokuphumula nezinsuku zokuqala zikaSepthemba kodwa lezo bekuyizinsuku ezimbili. Kungani lowomzamo wokusenza sikholelwe ukuthi leli hlobo belishisa kangaka?
Abaphenyi bahlola amarekhodi wesimo sezulu avela emhlabeni wonke futhi bathathe isilinganiso. Lokho kungukuthi, yize kuyiqiniso ukuthi eSpain kulo nyaka sibe nehlobo elipholile kuneleledlule, lokhu akusho ukuthi izinga lokushisa lomhlaba jikelele kulo nyaka alikho ngaphezu kwangaphambilini.
Ukufingqwa kwesimo sezulu ngenyanga ka-Agasti 2016 eSpain